musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Kopi yemakore mazana mana yeMona Lisa ichatengeswa muParis
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kopi yemakore mazana mana yeMona Lisa ichatengeswa muParis.
Kopi yaMona Lisa yaizotengeswa muParis yakafanana neyekutanga zvekuti zvinoita kuti muimbi uyu asvike padyo neshanduro yaLeonardo.
Kopi yezana ramakore rechi 17 yemukurumbira Leonardo da Vinci' Mona Lisa ari kunanga kuParis auction block.
Iyo inotyisa kopi yehunyanzvi hwaDa Vinci inotarisirwa kutora zviuru zana nemakumi mashanu kusvika mazana maviri ezviuru zveeuro.
Imwe kopi yezana ramakore rechi 17 yeMona Lisa yakatengeswa ne2.9 miriyoni euros muna Chikumi paChristie's muParis.
Artcurial auction house muParis, France yakazivisa kuti kopi yaLeonardo da Vinci's Mona Lisa kubva kuma1600 ichatengeswa neChipiri.
Ikopi yakatendeka yeunyanzvi hwaDa Vinci kubva makore anopfuura 400 apfuura ichaenda pasi pesando mwedzi mishoma mushure mekumwezve kudhindwa kweimwe yemifananidzo yepasirose pendi inotengeswa nemutengo wakarekodhwa.
Yekutanga yaLeonardo da Vinci, yakatengwa naMambo weFrance Francois I kubva kumupendi muna 1518, inoratidzwa muParis. Louvre miziyamu uye haisi kutengeswa.
Mona Lisa's kopi ichatengeswa muParis yakafanana neyapakutanga zvekuti muimbi angangove akasvika pedyo neshanduro yaLeonardo, iyo Artcurial auction house yakati.
"Mona Lisa ndiye mukadzi akanaka kwazvo pakupenda," nyanzvi yeimba yeArtcurial auctioneer, Matthieu Fournier, akadaro pendi ichienda kunoratidzwa pachena pamberi pekutengeswa.
"Wese munhu anoda kuve nemhando yepamusoro yeMona Lisa."
Kopi inotarisirwa kutora zviuru zana nemakumi mashanu kusvika mazana maviri ezviuru zvemaeuro ($150,000-$200,000).
Muna June apfuura, muunganidzi weEurope akatenga imwe kopi yezana remakore rechi17 ye Mona Lisa ye2.9 miriyoni euros (madhora 3.35 miriyoni), rekodhi rekodhi yebasa, paauction paChristie's muParis.
Uye muna 2017, Christie's New York akatengesa Salvator Mundi yaLeonardo da Vinci yemadhora mazana mana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora.